यस्तो छ संविधान संशोधनको भित्री चुरो
संशोधन किन ? संविधान संशोधनको चर्चा चलिरहेको समयदेखि नै धेरैपटक धेरै सार्वजनिक भेला एवं सञ्चारमाध्यममा नेकपा एमालेका नेताले भन्ने गरेका छन्– किन, कसका लागि र केका लागि संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो...
मधेसी नेताहरूको माग पुरा हुनेगरी संविधान संशोधन गरे देशको अस्मिता धरापमा पर्ने र नगरे चुनाव हुन नसकेर संविधान धरापमा पर्ने चेपुवामा यतिखेर नेपाल परेको छ । ‘साँप पनि मर्ने लौरो पनि नभाँचिने’ उपाय निकाल...
संशोधनको आवश्यकता र औचित्य लामो संघर्ष र कठिन परिश्रमपछि हामी संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गर्न सफल भयौँ । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने विषय सजिलो थिएन । संविधानसभाबाट संविध...
भूगोलको हिसाबले विश्वको तेस्रो ठूलो मुलुक चीन र सातौं ठूलो मुलुक भारतको बीच अवस्थित ९५ औ स्थानको मुलुक नेपाल आज भारतीय राजनीतिबाट पीडित छ । विश्व जनसङ्ख्यामा एक नम्बरको स्थान ओगटने मुलुक चीनले एक अरब ...
भारतलाई शिक्षा दिन खोज्दा मैले दुःख पाएँ
नेपाल–भारत सम्बन्ध विगत, वर्तमानमा कस्तो रह्यो र छ । भविष्यमा कस्तो रहला । नेपाली राजनीतिको पहिलो पुस्ता, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु र युवा राजनितिज्ञ, नेपाल भारत सम्बन्धका विभिन्न पाटाका विषयमा जानकार वि...
भनिन्छ इतिहास दोहरिन्छ । विषय, पात्र र स्थान मात्र बदलिन्छ । सोही भनाइलाई पुनः एकपटक सम्झने मौका मिल्यो २०७३ कात्तिक २३ गते विहान । माओवादी केन्द्रको कार्यालय पेरिसडाँडामा केही मानिसहरु यसरी आक्रोशित ...
कहिले गान्धारीको ठाउँमा, कहिले कुन्तीको ठाउँमा त कहिले द्रौपदीको स्थानमा आफूलाई राखेर हेर्ने महिला कति होलान् ? धेरै होलान् जसले महाभारतको कथा पढेका छन्, बुझेका छन्, सुनेका छन् । कथा नै थाहा नपाईकन ति...
आज भारतले लगाएको नाकाबन्दिको कारण देशको चौतर्फी जनजिवन चौपट बन्दै गएको छ । नेपालको जारी संविधानमा आफ्नो स्वमित्व दावी गरेर नाकाबन्दीको अस्त्र प्रयोग गर्ने भारतले तराईको क्षेत्रीय दलहरुको साहारालाई न...
बोलीचालीमा सार्वभौम भनिने भारतवेष्ठित मुलुक नेपाल आज भारतमय भएको छ । चाहे तरकारी व्यापार गर्ने युवतीको चर्चाको शीर्षक होस कि भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणमा दाहाल सरकारले जनतालाई दिएको सार्वजनिक बिद...
बिबाद गर्ने बानी हामी सबैमा धेरथोर छदैंछ । बिबाद किन , कसरी र कहाँ गर्नेले हाम्रो स्तरलाई निर्धारण गर्ने भएपनि यी तमाम बिषयमा हामी त्यती गम्भीर हुने गर्दैनौं । बिबादको जन्म कसरी भयो ? यस बिषयमा सबैभन्...
खोटाङ जिल्लाको जयरामघाट्देखि माधेवेशीसम्म लहलह धान र उखु फल्थ्यो । त्यहाँ खनजोत गर्ने, उब्जनी गर्ने अन्नवालीको हुर्काउने र मुखियाको घरमा भित्र्याइदिने सवै गरिव किसान र दलितहरु हुन्थे । मुखियाहरुले तिन...
परिवर्तन तब सम्म हुदैन जब सम्म हामी आफैं समय सापेक्ष रुपान्तरित हुदैनौं । सामाजिक क्रान्तिको लागि यथास्थितवादलाई चिरेर केहि नयाँ गर्ने दुस्साहास गर्नै पर्छ । जुन ईतिहास र अभ्यासले सिद्ध गरेका सत्यता प...